Ny Sony Xperia Z5 dia efa manomboka manavao ny Android 7 Nougat | Vaovao momba ny gadget
Miatrika vaovao tsara izahay ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ity finday Sony ity ary ny fahatongavan'ny OTA an'ny Android farany dia efa mahatratra ireo mpampiasa an'ity smartphone ity. Amin'ity tranga ity dia ny fanavaozana ny Sony Xperia Z5, fa i Sony kosa tsy mijanona amin'ny kinova vaovao ary maodely maro hafa ao amin'ny faritra Z dia mety ho avy tsy ho ela.
Amin'ny fitsipika izay ananantsika eo amin'ny latabatra no fanavaozana ny Xperia Z5 ary azo antoka fa ho fofonaina madio ireo fitaovana ireo. Nampiasa ny kinova beta i Sony tao amin'ny faritra Xperia Z ary androany dia efa manana modely hafa ao amin'ny lisitr'izy ireo miaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa tsy hita izy ireo, amin'izay afaka milaza isika fa nisy asa tsara vita.
Navoaka ny kinova vaovao fa raha tsy misy antony tsy hita ao amin'ny fikirakiran'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny OTA, azonao atao ny miditra mivantana amin'ny programa ôfisialy ary misintona azy amin'ny solosainao ary avy eo mamindra izany amin'ny fitaovana. Tonga ny vaovao iray volana taorian'ny nahazoan'ny maodely Sony Xperia X sy X Compact ilay kinova vaovao.
Ao amin'ny bilaogin'i Xperia Hahita fampahalalana bebe kokoa momba ity fanavaozana ity ianao, fa ny zava-dehibe dia efa misy iohey fitaovana kely kokoa no havaozina amin'ity kinova Android ity. Manantena aho fa ireo maodely hafa, ny Sony Japoney, koa dia mandray ny fanavaozana ny kinova farany azo ampiasaina amin'ny OS, saingy ity dia zavatra izay miadana tokoa na dia efa nolazaintsika tamin'ny fotoana teo aloha aza, miadana loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ny Sony Xperia Z5 dia efa manomboka manavao ny Android 7 Nougat
Ahoana ny fomba hitsitsiana ireo megabytes amin'ny taha azonao amin'ny fomba tsotra